तपाई गलत तरिकाले सुतिरहनुभएको त छैन ? यो हो सुत्ने सहि तरिका सबैले जान्नैपर्ने – Annapurna Daily
तपाई गलत तरिकाले सुतिरहनुभएको त छैन ? यो हो सुत्ने सहि तरिका सबैले जान्नैपर्ने
On Jun 17, 2021 1,712
एजेन्सी । आरामको लागि निन्द्रा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । राम्रोसंग सुत्ने, राम्रो निन्द्रा लिने व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक थकानबाट मुक्त हुन्छ । यसले गर्दा ऊ स्वस्थ त हुन्छ नै, काममा पनि प्रभावकारिता बढ्छ । सुत्नु भन्दा पनि कसरि सुतेको छ र कत्तिको गहिरो निन्द्रा लिएको छ भन्ने कुराले यो निर्धारण गर्छ ।
हामीले खाएको खाना बायाँ भागमा हुन्छ । दायाँ तर्फ फर्किएर सुत्दा त्यो खाना बसेको ठाउँ खलबलिन्छ । खाना छिटो पच्न थाल्छ र अम्लीय पदार्थ उत्पन्न हुन थाल्छ । बायाँ भागतर्फ फर्किएर सुत्दा हामीले खाएको खाना राम्रोसंग पच्छ, किनकी त्यो सही स्थानमा रहेको हुन्छ । त्यसैले गर्दा हाम्रो पाचनशक्ति बढ्छ र पेटसम्बन्धि समस्या पनि हट्छ ।
आजदेखि स्वस्थानी व्रत शुरू, श्री स्वस्थानी माताले सबैको रक्षा गरुन् (प्रथम अध्याय) सुन्नुहोस र सेयर गर्नुहोस्